Bible Mu Nsɛm Yona ne Apataa Kɛse No - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ ɔbarima a ɔwɔ nsu no mu no. Asɛm ato no kɛse, ɛnte saa anaa? Apataa no reyɛ amene no! Wunim saa barima yi? Wɔfrɛ no Yona. Ma yɛnhwɛ nea ɛyɛe a asɛnkɛse yi too no.
Yona yɛ Yehowa diyifo. Odiyifo Elisa wu akyi bere tiaa bi na Yehowa ka kyerɛɛ Yona sɛ: ‘Kɔ Niniwe kurow kɛse no mu. Nnipa a wɔwɔ hɔ no bɔne sõ dodo, na mepɛ sɛ wokasa kyerɛ wɔn wɔ hɔ.’
Nanso na Yona mpɛ sɛ ɔkɔ. Enti ɔforoo hyɛn a ɛrekɔ baabi foforo a ɛnyɛ Niniwe. Yehowa ani annye Yona ho sɛ na ɔreguan. Enti ɔmaa ahum kɛse bi tui. Ná ano yɛ den araa ma na hyɛn no reyɛ abɔ. Ehu kaa hyɛn no mufo, na wosu frɛɛ wɔn anyame.
Akyiri yi Yona ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Mesom Yehowa, Onyankopɔn a ɔyɛɛ ɔsoro ne asase no. Mereguan afi adwuma a Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ menyɛ ho.’ Enti hyɛn no mufo bisae sɛ: ‘Dɛn na yɛnyɛ wo na ahum no agyae?’
Yona kae sɛ: ‘Montow me nkyene po no mu, na ɛpo no bedwo.’ Ná hyɛn no mufo mpɛ sɛ wɔyɛ saa, nanso bere a ahum no ano yɛɛ den kɛse no, wɔtow Yona kyenee po no mu. Amonom hɔ ara ahum no gyaee na ɛpo no ano dwoe.
Bere a Yona rekɔ nsu no ase no, apataa kɛse no menee no. Nanso wanwu. Odii nnansa, adekyee ne adesae, wɔ saa apataa no yam. Ɛyɛɛ Yona yaw sɛ wantie Yehowa ankɔ Niniwe. Enti wunim nea ɔyɛe?
Yona bɔɔ mpae srɛɛ Yehowa mmoa. Na Yehowa maa apataa no kɔfee Yona too asase kesee so. Ɛno akyi no Yona kɔɔ Niniwe. So eyi mma yenhu hia a ehia sɛ yɛyɛ nea Yehowa ka biara anaa?
Yona nhoma a ɛwɔ Bible mu no.
Hena ne Yona, na dɛn na Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ?
Esiane sɛ na Yona mpɛ sɛ ɔkɔ baabi a Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ ɔnkɔ no nti, dɛn na ɔyɛe?
Dɛn na Yona ka kyerɛɛ hyɛn no mufo sɛ wɔnyɛ na ahum no agyae?
Sɛnea wutumi hu wɔ mfonini no mu no, dɛn na esii bere a Yona rekɔ nsu no ase no?
Yona dii nna ahe wɔ apataa kɛse no yam, na dɛn na ɔyɛɛ wɔ hɔ?
Bere a Yona fii apataa kɛse no yam no, ɛhefa na ɔkɔe, na dɛn na eyi kyerɛ yɛn?
Kenkan Yona 1:1-17.
Sɛnea ɛda adi no, Yona tee nka dɛn wɔ ne dwumadi a ɛne sɛ ɔnkɔka asɛm nkyerɛ Niniwefo no ho? (Yona 1:2, 3; Mmeb. 3:7; Ɔsɛnk. 8:12)
Kenkan Yona 2:1, 2, 10.
Ɔkwan bɛn so na Yona asɛm no ma yɛn awerɛhyem sɛ Yehowa bɛma yɛn mpaebɔ ho mmuae? (Dw. 22:24; 34:6; 1 Yoh. 5:14)
Kenkan Yona 3:1-10.
Nkuranhyɛ bɛn na yenya fi kɔ a Yehowa kɔɔ so de Yona dii dwuma ɛmfa ho sɛ mfiase no wanyɛ adwuma a ɔde hyɛɛ ne nsa no mu? (Dw. 103:14; 1 Pet. 5:10)
Dɛn na Yona suahu a onyae wɔ Niniwefo ho no kyerɛ yɛn fa nnipa a yebedi kan abu wɔn atɛn wɔ yɛn asasesin mu no ho? (Yona 3:6-9; Ɔsɛnk. 11:6; Aso. 13:48)
Yona Ho Bible Krataa
Sɛ yɛkenkan Yona ho asɛm wɔ Bible mu a, Yehowa su bɛn na yɛhu?